Kedu afọ bụ igwe kwụ otu ebe maka? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ebube igwe - esi edozi
Ebube igwe - esi edozi
Kedu afọ bụ igwe kwụ otu ebe maka?
Ebube anyịnya igweadabara dị ka nke mbụigwe kwụ otu ebema dị mma maka ụmụaka site na afọ 3ochie. Ha bụkwa ụzọ dị mma maka ụmụaka ịchọta ụkwụ ha tupu ha agaa na pedalanyịnya igwe. Mgbe obere nwa gị buru ụzọ nweta nke haigwe kwụ ọtọ, ha nwere ike 'na-ejegharị' naigwe kwụ otu ebe- ijide aka na-agagharị na ịgagharị ya.
Nke a bụ etu nwa gị ga - esi bụrụ onye nwere ntụkwasị obi n’ịgba igwe bido site na mbido mgbe ha na - ekpori ndụ ma na - agba ọsọ, ma nwee ike bido kewaa igwe kwụ otu ebe site n’ihe dị ka afọ abụọ. Ndị a bụ ụfọdụ usoro dị mfe iji malite ịmalite Gịnị bụ igwe kwụ otu ebe? Obere igwe eji agagharị agagharị maka ndị na-amụ ije ọ nweghị ụkwụ ọ bụla ma ọ bụ nke taya buru ibu. Ọtụtụ igwe kwụ otu ebe na-eji igwe breeki abịa, ọ bụ ezie na ọtụtụ ụmụaka na-eji nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ. gaa n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị Gbanwee igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na ị họpụtara ya maka nwa gị, nwa ahụ kwesịrị iyi okpu agha ma hụ na ha nọ ọdụ n'ụzọ ziri ezi ga-ekpuchi ihu ha ma eriri ahụ ga-esi ike na taya ga-agbalite, ka sadulu ahụ ekwesịghị ịma jijiji. brekị kwesịrị ịbụ have ga-apụ na igwe kwụ otu ebe wee tụgharịa ụkwụ gị n'elu igwe kwụ otu ebe ebe ị nọ ma jiri ụkwụ gị gbagoo n'elu ụkwụ abụọ ahụ kwesiri ịdị larịị na ala ma aka abụọ kwesiri ịnọ na aka ahụ ka nwata ahụ nwee ike mezuo brakị. nkasi obi nkịtị mana naanị ịbanye na igwe kwụ otu ebe anaghị ebuli nwatakịrị ije n'elu igwe kwụ otu ebe jiri nwayọ jiri ịnyịnya igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụsị ịkwụsị ịgba ọsọ gaa ọzọ wee daa ụkwụ gị n'ala cheta ebe ị na-agaghị ile anya n'ụkwụ gị ị ga-anọdụ ala ma lelee n'ihu n'ihu Ọ na - enyere aka ịnwe onye nọ gị n'ihu ka ọ lelee gị Ileba anya na ụmụaka na - emegharị uche ngwa ngwa ị nwere ike ịme nke a mgbe niile ma nwa gị ga - aga ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ha chọrọ jiri nwayọ gbaa ume ịga n'ihu, kwuo ka Push Push Glide họrọ obi dị nwayọ ma gbaa ha ume ka ha kwụpụ ụkwụ ha n'ala Octus na-eme ka ha zuo oke ma nwaa ọzọ.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ịhọrọ igwe kwụ otu ebe kama ịnwe igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ihe egwuregwu dịka ịnyịnya ígwè mbụ gị kwenyere na ọ kacha mma ịmụ nhazi tupu ị nwaa ịnyịnya ụkwụ na-enweghị enyemaka, nwa gị ga-enwe ike ịchịkwa igwe kwụ otu ebe ma mụta iduzi ya na jiri nwayọ nwayọ, ozigbo ị buliri ụkwụ ha elu, ịnwere ike inyere ha aka iduzi igwe kwụ otu ebe site n’ime ka ha dabere ma jiri nwayọ mechie aka ndị ahụ. Can nwere ike igosi ha otu ha ga - esi jiri nwayọ breeki mgbe ha dị njikere Oge niile na - ekpori ndụ tupu ike gwụ nwa gị ma ọ bụ agụụ na - agụ nwa nwere ike ịme naanị ịgba ịnyịnya ígwè ihe dị ka ọkara elekere, yabụ were obere igwe kwụ otu ebe ma na - apụ apụ n'oge na-adịghị anya nwa gị ga-emegharị anya site n'oge nwa gị gbara afọ 4 ma na-ejikarị igwe kwụ otu ebe, transitiongbanwe na igwe kwụ otu ebe na-enweghị ndị na-eme ka ọ dị mfe n'ihi na ha amụtalarị ịhazi nduzi na braking iji ruo na-esote-agba ume nzọụkwụ iji nweta, ọbụna ma ọ bụrụ na ọganihu bụ ngwa ngwa na ị ejedebe na-ebu igwe kwụ otu ebe n'ụlọ
Gịnị bụ isi nke a itule igwe kwụ otu ebe?
Izizi: Isinzube nke a itule igwe kwụ otu ebebụ ịkụziri nwata ihenhazimgbe ha na-anọdụ ma na-efegharị, nke bụ ihe kasị sie ike akụkụ nke mmụta na-agba ịnyịnya aigwe kwụ otu ebe! Ọzụzụ ọzụzụ na-egbochi nwata ịnwa ọbụnanhazina n'ezie agba nkịtị na-agba ịnyịnya na a tilt, nke bụ kpam kpam anyanhazi.Ọnwa Ise 17, 2021
Ego igwe kwụ otu ebe bụ ihe efu nke ego?
Ọ bụ ezie na ọtụtụ na-achọpụta na enwere ike iwere ya dị kaigbu egon'ihi iji oge dị mkpirikpi mee ihe, nke ahụ ga-abụ echiche dị mkpirikpi. Eziokwu bu, iheigwe kwụ ọtọdị irè n'ịkụziri ụmụaka otu esi agba ịnyịnya aigwe kwụ otu ebena ha na-eto ngwa ngwa si na ya.
Cheedị onye na-eme mkpebi ego n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ka anyị kpọọ ya 'Penny'. Penny na-abịakwute nsogbu ego ọ bụla site n'echiche zuru oke na ọgụgụ isi.
Ọ naghị enwe mmụọ ma ọ bụ mkpali ma na-amata mgbe ọ bụla maka ọdịmma nke ya. Ikekwe ị nwere ike iche na Penny na-ada n'echiche (na ụdị mkparị). Mana ihe karịrị otu narị afọ, ọtụtụ ndị ọkachamara n'ihe banyere akụnụba kwenyere na ọ bụ pennies mejupụtara ụwa.
Na mụ na gị na onye ọ bụla ị maara mgbe ọ bụla mere mkpebi kacha mma iji mee ka obi ụtọ anyị dịkwuo elu, dị ka nke ahụ na-ada, bụ nkwenye a ma ama ruo mgbe otu obere ndị ọkà mmụta akụ na ụba na ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ malitere ịjụ ma Penny ọ dịdị adị.
Otu n'ime ha, Richard Thaler, natara Nobel Nrite n'afọ gara aga maka igosi na ndị mmadụ anaghị emehie ego, ha na-emehie emehie. Ọ na-akwa emo na ọ kpọrọ nyocha ya 'Ndị Ogbi Ndị Na-eme Ihe,' ma ugbu a, a na-akpọ ya Behavioral Economics ma gbanwee usoro ọha na eze gburugburu ụwa na ndị mmadụ enweghị ike iwepu mmetụta ha kpamkpam na usoro mkpebi, mana ikike ịkọ ndị ahụ enweghị ego, nwere ike inyere gị aka izere ha. Ka anyị kwuo na ị na-enyere nne gị aka ihicha ebe a na-adọba ụgbọala wee chọta mkpọ Pokemon Cards nke ị ga-azụrịrị dịka nwatakịrị ma chefuo imeghe.
Ntụle igwe kwụ otu ebe
Ya mere gafere ya na HOLY COW nwere mbipụta mbụ nke Charizard na ọnọdụ mint! Agbanyeghị na ị nwere ike ị nweta $ 3,000 nfe maka ya na ebay, kpebie ịzụta okpokoro ma debe ya n’elu shelf n’ụlọ gị. Ọ dị mma, ka anyị laghachi ma lee ọnọdụ ọzọ anya: kama inyere mama gị aka ihicha ebe a na-adọba ụgbọala, ị kpebiri ịga ụlọ ahịa akwụkwọ egwu. N'ebe ahụ, ị ​​ga-ahụ mbipụta mbụ Charizard kaadị na ihe ngosi maka $ 3,000.
Ọ bụ ezie na ị hụrụ Pokemon n'anya na mbụ, ị gaghị eche nrọ ị ga-eji ụdị mgwakota agwa na kaadị egwu wee pụọ na ụlọ ahịa ahụ. Nke a nwere ike iyi ka ọ bụ omume nghọta, mana ọ bụ enweghị ezi uche. ị na-ekpebi a Charizard kaadị bụ uru na-enye elu $ 3,000, ma na nke abụọ dịruru ná njọ ị na-ekpebi a Charizard kaadị bụ uru na-enye elu na $ 3,000.
Maka izu oke dị ka Penny, ma ị nwelarị kaadị ahụ kwesịrị ịbụ ihe na-adịghị mkpa ma a bịa n'ikpe ikpe ziri ezi, mana maka ndị dị ka mụ na gị, o doro anya na ọ dị oke mkpa. Thaler kpọrọ nke a 'mmetụta nke ntọala,' ọchịchọ anyị itinye uru karịa ihe anyị nwere karịa nke anyị nwere. Oge ọ bụla ị jụrụ ire ihe maka ego karịa ka ị ga-akwụ maka ya, ị na-enweta ntọala ntọala ahụ.
Ugh, ihe nkiri a jọgburu onwe ya! Ama m. Ka anyị hụ ihe ọzọ. Anyị enweghị ike.
Gịnị mere? Maka na akwụrụ m $ 6 iji gbazite ihe nkiri a! Anyị enweghị ike tufuo ego ahụ! Naa! Burned gbara okpokoro ọkụ! Ọfọn anyị kwesịrị imecha ya. Akpa ahụ bụ 89. you hụtụla ihe nkiri ị kpọrọ asị ruo n'isi ma ọ bụ mechaa nri? Younụghị arụ ya naanị maka na ị kwụrụ ụgwọ ya wee chọọ 'inweta ego gị'? Abụ m KLỌ SUNLỌ AHK.
Ọ dịghị ka ịnọ ọdụ na ihe nkiri emoji na-akwụghachi ụgwọ mgbazinye - ego ahụ abanyela ma ghara ịlaghachi, yabụ gịnị kpatara ikpughere onwe gị na mgbu ọzọ? Otutu n’ime anyi na-edebe akwukwo nke obi n’isi anyi, na-etinye uche nke obere na uru na ntufu karia uhere na enwetara ya. Ọbụna ma ọ bụrụ na ikiri ihe nkiri ahụ na-eme ka ị ghara inwe obi ụtọ, ma ọ dịkarịa ala na $ 6 ekwesịghị ịbụ ọnwụ na akwụkwọ nyocha nke uche gị ma ọ bụrụ na ịnọdụ na ya. Egwu anyị na-atụ maka ụgwọ ọnụ ahịa dị ukwuu nke na ụlọ ọrụ nwere ike iji ya pịpụkwuo ego karịa anyị.
inupụ ihe ịma aka
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-ere 'otu' ndị gụnyere uru dị ka ego na mbupu n'efu. Ha maara na ụfọdụ ndị na-azụta ihe ndị ọzọ na-achọghị ha naanị iji hụ na ha 'ruru ego ha'. Cheedị ịzụ ekweisi na ịzụta ụfọdụ maka $ 15 mgbe ị hụrụ na ụlọ ahịa dị n'okporo ámá na-ere otu ụzọ ahụ maka $ 10.
Ọ na-ewe nkeji iri lk. Ga-eme ya? Ọfọn, otu ndapụta ma oge a ịzụta laptọọpụ, ụlọ ahịa mbụ nwere ihe nlereanya ịchọrọ maka $ 675. storelọ ahịa nke abụọ $ 670.
Ugbu a ị na-aga ije? Otutu mmadu gha aza ajuju abuo a di iche, obu ezie na ha bu otu ajuju ajuju: ije ije nke nkeji iri riri $ 5? Ọnọdụ ndị ọzọ niile ekwesịghị ịbụ ihe na-adịghị mkpa. Mana o yikarịrị ka ndị mmadụ ga-asị ee na mbụ, n'ihi na ọ dị ka ị 'na-enweta ezigbo ahịa. A maara nke a dị ka uru azụmahịa, ọnụ ọgụgụ nke obi ụtọ ma ọ bụ ihe mgbu anyị na-enweta mgbe ọ dị anyị ka anyị akwụla obere ma ọ bụ karịa ihe bara uru, ọ na-abụkarị iche kpamkpam obi ụtọ ị na-enweta site na ihe ahụ n'onwe ya na-erigbu uru nke azụmahịa, dị ka ndị a ma ama gabiga ókè “emeputa si ere price”, nke na-eme ka ọ dị ka ọ bụrụ na ihe ọ bụla bụ mgbe niile na-ere.
Na ụfọdụ ndị na-azụ ahịa na-eri ahụ uru nke ukwuu nke na ha juputara n'ụlọ ha site na njuju ịchọrọ, ọ dịghịkwa mgbe ha ga-eji ya chụọ ahịa ahụ. N'ezie, ọ dị mkpa ilegharị anya mgbe niile ịchọta ihe kacha mma, mana cheta na site n'ịzụrụ ihe ọ bụla, naanị ihe dị mkpa bụ ihe bara uru nye gị won meriri $ 100 na ọkọlọtọ lọtrị, gịnị ka ị ga-eji ego ahụ mee? Zụta akpụkpọ ụkwụ dị oke ọnụ? Rie nri abalị mara mma? Imirikiti ndị mmadụ na-ekwu na ha nwere ike itinye ego ha na-atụghị anya ha na ihe na-enweghị isi n'ihi na hey, ọ naghị amasị m ịrụ ọrụ maka ego ahụ. Ọ bụ n'efu! Thaler kpọrọ usoro ọgụgụ isi nke uche a, nke pụtara ịkekọrịta ego n'ụdị echiche.
Echiche ọgụgụ isi na-emebi iwu na ego na-atọ ụtọ, ya bụ, na-agbanwerịta ibe ya. Ozugbo ị nwere dollar, ọ dị ka ndị ọzọ, ekwesighi ịgwọ ya ọ bụla naanị n'ihi na o sitere. Maka Penny, akpụkpọ ụkwụ abụọ a bara uru ịhapụ $ 100 ma ọ bụ.
Naanị n'ihi na ụfọdụ ego na-atụghị anya ya gbapụtara na-eme ka akpụkpọ ụkwụ ahụ agaghịzi aba uru. Echiche aza ajụjụ nwere ike na-enye aka maka ịmepụta na ịrapara na mmefu ego kwa ọnwa, mana ọbụlagodi na ọ nwere ike iduga anyị n'okporo ụzọ enweghị isi. Otu nnyocha lekwasịrị anya n'otú ndị na-azụ ahịa si meghachi omume na nkwụsị nke mmanụ ụgbọala site na 4 gaa na dollar 2 na mmalite nke nsogbu ego nke 2008, n'ihi ya, ị ga-eche na ọtụtụ ezinụlọ ga-achọ ọtụtụ n'ime ego ahụ $ 40 kwa izu Kama nke ahụ, ndị nchọpụta chọpụtara na , ihe ijuanya bụ na ndị mmadụ na-emefusị ego ndị ahụ e tinyere na mmanụ ka mma! Ọ dị ka ha nwere ego ole kwa ọnwa na obi ha na mmanụ ụgbọ ala ma yabụ ga-emefu mmanụ ụgbọ ala; ha enweghị ike ịgwọ ego ahụ dị ka ihe na-emetụ n'uche nke uche na-abụkarị ihe na-ezighị ezi maka otu ihe kpatara ya: n'ihi na ụbụrụ anyị abụghị nnukwu ụlọ ọrụ kọmputa zuru oke ma anyị na-eji ọtụtụ ụzọ mkpirisi uche na nke mmetụta uche iji gafere.
Mana ọ bụrụ na ịmara ihe ndebiri ndị ahụ bụ, ịgaghị ịdabere na ha maara ihe dịka Penny n'ọdịnihu mana ịbụ pen na-enweghị isi mara mma dịkwa mma.
Ma nke ahụ bụ ego anyị! Maka ama atụ ndị ọzọ nke 'ihe nzuzu ndị mmadụ na-eme', lelee mmebi iwu Richard Thaler: Theme akparamagwa akparamaagwa. Ọ bụ akụkọ na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ site na nyocha Thaler. juputara na ihe omumu di egwu iji kpalie gi iche echiche banyere ego.
Ekwesịrị m ịnweta igwe kwụ otu ebe maka afọ 2 m?
Ebube anyịnya igwebụ otu n'imeihengwaọrụ kachasị mma maka enyemakanke gina-amụ ije ịzụlite ha oké moto nkà. Dabere na Kid SenseNwaDevelopment, mmụtanhazina ịhazi ihe dị mkpa maka mgbochi mmerụ ahụ, nhazi onwe gị, yana ịtọlite ​​ntọala maka mmepe n'ọdịnihu nke ezigbo ngagharị.Ọgọst 20, 2015
Họrọ igwe kwụ otu ebe bụ usoro dị mfe, mana enwere isi ihe dị mkpa icheta. Otú ọ dị, anyị ga-abụ onye mbụ kwetara na anyị abụghị ndị ọkachamara na mpaghara a yabụ na anyị emepela igwe kwụ otu ebe Toila nke otu ndị ọkachamara n'ezie na-enye anyị nduzi, nke a bụ igwe kwụ otu ebe m, isi okwu abụghị ịhọrọ igwe kwụ otu ebe dabere na afọ, enwere ngwaọrụ ụmụaka na obere ụmụaka. Ọ bụ ezie na enwere ike ịnwe ụfọdụ akara aka, afọ naanị ezughị iji hụ na nwa gị nwere nchekwa ma nwee ntụsara ahụ na igwe ọhụrụ ha, otu esi ahọta ha nke ọma, tụọ ogologo ha na mbụ, ọ bụrụ na ịnwere ike ịme ha ka ha nọrọ ogologo oge na-esote mgbidi.
Tinye akwụkwọ n'isi ya wee kaa ebe ahụ n'ahụ aja ebe ọ kụrụ n'ala na nke ahụ bụ ogologo ya wee tụọ ogologo ije ya ugbu a nke a bụ akụkụ kachasị mkpa Tinye akwụkwọ ahụ n'etiti ụkwụ nwa gị na akwụ n'akụkụ mgbidi ahụ. Tụọ ọzọ isi na mgbidi ebe akwụkwọ ahụ zutere ogologo nke insi-ogwe aka gị were nha abụọ a Ugbu a ị ga-enwerịrị ike ịmatakwu nha ahụ. Imirikiti ndị na-emepụta igwe kwụ otu ebe na-edepụta ịdị elu na ogologo ogologo dịka nduzi na weebụsaịtị ha.
Yabụ ọ bụrụ na ị gaa ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe gị ma ọ bụ ịpụ, ị nyela iwu n'ịntanetị. Kedu ka isi mara nke a bụ nha ziri ezi? Ihe mbụ ị ga-ele anya bụ na mgbe ị nọ ọdụ na ihe nkesa dị ka nke a, jiri otu ụkwụ n'ala ma otu ụkwụ na pedal na ala nke hub ahụ, ikpere gị dị ntakịrị, dị ka nke ahụ, ọ bụ otu ihe ahụ na. Eziokwu ahụ bụ na ị ga-abanye n'ụgbọ ịnyịnya na-eto eto ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha anọdụ ala na soda na ụkwụ abụọ ya n'ala na-eme ka o doo anya na bọọlụ nke ụkwụ abụọ ahụ nwere ike iru n'ala maka nkwụsi ike, mana gbaa mbọ hụ na mkpụrụ ndụ adịghị oke ala, ebe ọ bụ na ịgbagharị na-esiri gị ike na ọ nwere ike ime ka ị dozie obere ihe - ka ikpere gị enweghị ike ịkwaga site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ, igwe kwụ otu ebe dị obere, yabụ, enwere ike idozi sadulu ahụ ka nwa gị nwee ike elu nketa ụkwụ ala ewepụghị n'ala ma ka nwere a nta bịada na ha ikpere Oh, mgbe na-eji ziri ezi etiti na wheel size, nke a bụ eleghị anya, ihe kasị mkpa akụkụ nke kwesịrị ekwesị nke abụọ anyịnya igwe a igwe kwụ otu ebe, na-n'ezie ọma na-enwe fun, ka nwere ilezi anya maka ụfọdụ akụkụ ndị ọzọ nke saịtị th A na-emegharị iche maka ndị pere mpe, yabụ tinye Lezie anya na brek aka gị ka ọ dị mfe iru ha, ị nwekwara ike ilele dayameta nke obere aka na - eme ka ha nwee nchedo n'apata ụkwụ na brek yana , Gbaa mbọ hụ na ndị levers dị mfe dọpụkwa kwa Lezienụ anya na cranks na pedal, n'ihi na ha ga-enwerịrị etu o kwesịrị ka ndị ọzọ fọdụrụ, ọkachasị ka e wee nwee ike gbanwee sadulu ahụ ka ọ bụrụ ogo ziri ezi, mana ọ ka ụkwụ na-abịakwute ikpere na hips ekwesịghị ịdị oke obosara ka o wee nwee nkasi obi na nke ahụ pụtakwara na igwe kwụ otu ebe dum n'onwe ya b.
Ubé miri na ka a otutu ohere mgbe cornering. Snow ebe a ga-abụ ihe m na-agaraghị eche echiche, mana o doro anya na ụmụaka ndị na-eto eto ga-anọdụrịrị ala na igwe kwụ otu ebe karịa ụmụaka, n'ihi na akụkụ ahụ ha dị ukwuu karịa nke ukwuu, enwere oge buru ibu iji mee elu igwe, njikọ dị n'etiti afọ bụ u ihe dị ka afọ ise na nwa oge nke ahụ ziri ezi, ọ na-adịchaghị mma maka ya ka a gbagoo, mgbe ahụ ọ dị mfe mụta ịnya ịnyịnya ígwè mgbe ị na-enwe mwute ma ọ bụ kwụ ọtọ, ọ bụghị na ọ ga-abụ aero I ' Aga m na otu nkeji otu Billy dịkwa mma nwa nwoke Poppieson dị mma, ka anyị mee ndudue mgbe ịzụrụ igwe kwụ otu ebe maka nwa gị, ọ bụ ịhọrọ oke buru ibu ka ha wee nwee oge itolite na ya ma ọ dị mma na ọ bụ ihe banyere nke m mejọrọ onwe m n'oge gara aga mana anyị kwesịrị ịnwale izere ọnwụnwa a n'ihi na nnukwu igwe kwụ otu ebe siri ike maka ha ịnagide na ha anaghị enwe obi ụtọ na iti mkpu ọ nwekwara ike imebi ntụkwasị obi ha ma ọ bụ bụrụ eziokwu. nwekwara otutu le ss safe ka ibu wiil nwere ike ime ka igwe kwụ otu ebe dị mfe ijikwa, kwụsie ike, wee nwee ike ijikwa bump iji jikwaa ihe. Ya mere, gịnị ma ọ bụrụ na ịhọrọ n'etiti wiil 16 na wiil 20? Ọkpụkpụ igwe na nwa gị nwere nkasi obi ma họrọ maka igwe kwụ otu ebe buru ibu.
Anyị na-abịa azụ ntakịrị booboo boo boo boo boo Na njedebe, ịhọrọ igwe kwụ otu ebe kwesịrị ekwesị maka nwa gị bụ maka ijide n’aka na ha nwere ahụ iru ala. Cheta na ị gaghị ekpebi dabere n’afọ ndụ ha na ụmụaka ndị nke obere ga-abụ ndị ziri ezi na akụkụ nile nke igwe kwụ otu ebe ga-aha nha. Ugbu a bụ oge ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụkwuo ibu na mgbawa anyị na-akụ site na mgbochi ochie, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ isiokwu ndị ọzọ gbasara igwe kwụ otu ebe mana oge a maka ndị okenye, ọ bụrụ na ị kụrụ onwe gị mgbe ahụ enwere ihe ọzọ gbasara otu ị si emezi sadulu elu na ọtụtụ nke ụkpụrụ na-anọ otu ma ọ bụ nanị ala n'ebe ahụ maka a isiokwu banyere crank ogologo na anyị kwuru dịkwa mkpa n'ihi na ụmụaka na-agba ịnyịnya ígwè oh wee hụ na ị na-adịghị na-tụrụ ụtụ GCN yeah
Ọ bụ 3 emeela agadi maka igwe kwụ otu ebe?
3afọochiebụ n'ezie afọ kacha maka ijiedozi nguzozina ọtụtụ ụmụaka ga-eme nke ọma na aigwe kwụ ọtọn'elu ọzụzụigwe kwụ otu ebeya na ndị na-edozi ihe n'oge a. childrenfọdụ umuaka mgbe ha ruru afọ3ga-agba mgba na pedals na ọzụzụigwe kwụ otu ebedị ka ha nwere ike ọ gaghị adị njikere pedal ma.
Ndi igwe kwụ otu ebe kwesiri ya?
Ya mere iji zaa ajụjụ ahụedozi nguzozi kwesirimama? Kpamkpam! Anyị hụrụ nke anyị n'anya ma ọ gafere obere nwanne nwanyị nke ga-enye ya obere ihe ọ ga - eme ka ọ bụrụ obere ihe maka ya. E nwere ihe ole na ole m nwere ike ikwu mgbe ịmalite na aigwe kwụ ọtọ.
Gịnị mere igwe kwụ otu ebe adịghị mma?
Ebube anyịnya igweemere ka nwa gị nọrọ ọdụ n’oche ma jiri ụkwụ na-agbanye onwe ya. Onyeigwe kwụ otu ebega-agbada nwa gị ọsọ ọsọ ọsọ ma tụgharịa. Nke a nwere mmetụta nke ịkụziri nwa gị ume, 'na-alaghachi naigwe kwụ otu ebe'.
Ngwongwo igwe kwụ ọtọ dị egwu?
Ebube anyịnya igwebụ ụzọ dị mma maka nchekwa dị iche iche na ụkwụ ọzụzụ maka ụmụ aka. Dịka enweghị pedal, nwatakịrị ahụ nwere nchekwa nke ịnwe ụkwụ n'ụkwụ. Ọ bụrụ naigwe kwụ otu ebena-amalite ikpu, nwatakịrị ahụ nwere ike iji ụdị ụkwụ ha na-achịkwa iheigwe kwụ otu ebedebekwa onwe ha ka ha daa.
Ego ole ka ị kwesịrị imefu na igwe kwụ otu ebe?
Ahịa. Ọ bụlaigwe kwụ otu ebeka mma na mbaigwe kwụ otu ebe. Na-atụ anya naemefu$ 100 ka $ 150 iji nweta ezigbo mmaigwe kwụ otu ebe-otunke ahụ ga-adịru nwa oge, nwee nchedo, ọ ga-agba nke ọma maka kiddo gị.Machị 3, 2016
Balancegba igwe kwụ otu ebe dị mma karịa igwe kwụ otu ebe?
Ebube anyịnya igwepere mpe ma fechaakarịa igwe kwụ otu ebenke pụtara na ụmụaka afọ a ga-enwe ike ịmụta otu esi ejikwa ma na-emegharị ha ngwa ngwa. Dị kaụkwụ anyịnya igwedị arọ, ọ na-esiri anyị ike ịtụtụrụ ma mụta otu esi eji nanhazina, ọbụna na-azụ ọzụzụ.
Kedu ka ị si akwụsị na igwe kwụ otu ebe?
Howmụta otúKwụsịa ngwa ngwa na-akpụ akpụigwe kwụ otu ebedị oké mkpa n'oge ikpeazụ n'ụzọ abụọ nkeigwe kwụ ọtọna-agba ịnyịnya. Bymụaka site na okike mara iji ụkwụ haKwụsị. Ha na-ejikarị ụkwụ ha niile eme iheKwụsị, na-eji ikiri ụkwụ ha na ụkwụ ha n'ihu ha.Ọnwa Ise 17, 2021